​वर्षमा दुई फिल्म खेलेर कति कमाउन चाहान्छन्, निखिल उप्रेती ? (भिडियोसहित)
Sat Feb 25, 2017 Studio Time: 17:23:29
मंसीर २८, काठमाण्डौँ ।
एक्सन हिरोको उपमा पाएका निखिल उप्रेती सिने क्षेत्रमा फेरी चम्कीएका छन् । केहि वर्ष हराएका निखिल चलचित्र भैरव लिएर उदाए । भैरवले गतिलो व्यापार गर्यो । निखिललाई सिने क्षेत्रमा दर्शकले भव्य स्वागत गरेको रुपमा त्यसलाई परिभाषित गरियो । भैरव लगत्तै उनको अर्को फिल्म लुटेरा बाहिरीयो । लुटेरा हेर्ने दर्शकको पनि हलहलमा भिड देखियो । निखिलको क्रेज पहिलेको जस्तै देखियो । अहिले निखिललाई फिल्म खेल्ने प्रस्तावको ओइरो लाग्न थालेको छ । थोरै तर राम्रा फिल्ममा मात्र अभिनय गर्ने उनको योजना छ । त्यीनै राम्रो मध्येको एक चलचित्र संरक्षणमा अभिनय गर्नका लागि उनी राजी भएका छन् । संरक्षण आउँदो माघ महिनाबाट छाँयाकनमा जाने बताइएको छ । एउटा चलचित्रको लागि पुरै दुई महिनाको दिने निखिलले बताएका छन् ।
यस हिसाबले वर्षमा ६ वटा सम्म चलचित्रमा अभिनय गर्ने उनको सोच छ । उनी भन्छन्, भने जति पारिश्रमीक पाएमा वर्षमा दुई भन्दा बढी फिल्म गर्नै चाहान्न । बाँच्नु पनि पर्यो त्यसैले कमाउनका लागि पनि ६, ७ वटा फिल्म गर्नु पर्ने बाध्यता छ । निखिलको यस्तो गुनासोमा पत्रकारले पश्न थपे, कति पारिश्रमीक पाए वर्षमा दुईवटा फिल्म खेल्ने ? निखिललाई निकै गाह्रो पर्यो । केहि बेरको घुमाउरो कुरा पछि अन्तिममा निखिल मुख खोल्न बाध्य भए ।
उनले भने, एउटा फिल्मको २० लाख पाएमा वर्षमा दुई वटा फिल्म मात्र गर्न तयार छु । यस हिसाबले निखिल वर्षमा ४० देखि ५० लाख कमाउन चाहान्छन् । उनको यो चाहाना नेपाली फिल्म उद्योगले पुरा गर्न सक्ने दिन चाँडै देख्न पाइयोस् ।